प्रत्येक सञ्चालन प्रणाली यसको आफ्नै भण्डारण मानक प्रयोग गर्दछ। यो फाइल सिस्टम प्रकार बुझाउँछ। विन्डोज ओएस हाल सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्तिगत कम्प्युटर छ, यो नयाँ प्रविधिहरू र दक्षता वृद्धि गर्ने विचार परिचय। को NTFS फाइल सिस्टम अनुवाद मतलब जो नयाँ प्रविधि फाइल प्रणाली नयाँ प्रविधि फाइल प्रणाली, को लागि खडा छ। यसलाई विशेष प्रणाली विन्डोज को अपरेटिङ सिस्टम परिवारको लागि विकास गरिएको छ।
NTFS जुन 1993, फाइल सिस्टम मा भएको थियो, तर सबै विवरण बाहिर काम गरेको छ जब, र त्यहाँ यसको लागि आवश्यकता थियो यो धेरै पछि शुरू। यो बोसो सिस्टम, नयाँ कार्यहरू सामना गर्न सकेन, जो प्रयोग गर्नु अघि, अर्थात्, डाटा, ठूलो फाइल र अन्य कुराहरू नयाँ प्रकार को उद्भव। NTFS प्रदर्शन वृद्धि गर्न आत्म-संगठित जानकारी सक्षम छ कि मेटाडाटा समर्थन गर्दछ।
यी सबै लाभ बोसो र HPFS प्रणाली भन्दा ठूलो दक्षता गर्न नेतृत्व गरेका छन्। यस मामला मा, विकासक्रम साथै, संयुक्त गरिएको छ को तागत प्रत्येक प्रणाली एक उच्च स्तर बढ्न सक्ने केही नयाँ कुरा प्राप्त गर्न। NTFS पढाइ, लेखन, र फाइल भण्डारण सबै मानक संचालन गर्न सक्षम छ, तर यसलाई कार्यान्वयन क्षमता मामलामा अझ प्रभावकारी छ प्रणाली बहाल। यसबाहेक, NTFS फाइल सिस्टम पनि हार्ड ड्राइव ठूलो मात्रा, कि समय आधारभूत आवश्यकताहरु को एक थियो जो काम गर्न सक्नुहुन्छ।
कम्प्युटर प्रणाली को विकास सुरक्षा वृद्धि गर्न आवश्यक भएको छ संग, यो कार्य, बाहिर हुनुपर्छ नयाँ फाइल प्रणाली को खर्च मा सहित। कम्प्युटर सक्रिय कर्पोरेट वातावरण प्रयोग गरिएको छ, त्यसैले त्यहाँ विशिष्ट आवश्यकताहरु थिए। यो फाइल सिस्टम को संभावना निजी प्रयोगकर्ता विशेषाधिकार लागू हुन्छ। यो उद्यम डाटा लागि विश्वसनीय सुरक्षा सुविधाहरू सिर्जना लागि आधार छ।
विभिन्न अपरेटिङ सिस्टम मा NTFS प्रयोग
को NTFS फाइल सिस्टम धेरै अपरेटिङ प्रणाली, बस विन्डोज छैन समर्थन गर्दछ। अन्य उदाहरणहरू बीचमा केही डाटा भण्डारण ढाँचा औसत रूपमा यो निःशुल्क र Linux मा एप्पल म्याक ओएस एक्स स्थापित स्वीकार छ कम्प्युटर प्रदान गर्न छ। को NTFS फाइल सिस्टम प्रयोगकर्ता तिनीहरूलाई काम गर्न प्रशस्त मौका हुन्छ, जस्तै फाइल अनुमति संग सुधार प्रदर्शन कार्यान्वयन गरिएको छ।
सामान्य मा, विकास सिस्टम छैन जटिल कुरा हो, तर अन्त मा एकदम शक्तिशाली उपकरण बाहिर गरियो। विचार प्रणाली सबै फाइल डाटा को एक निश्चित संरचना थियो। सबै एक फाइल मा संयुक्त, र सबै डिस्क स्पेस क्षेत्रहरु विभाजन गरिएको छ। पनि मेटाडाटा, अर्थात् डाटा फाइल सिस्टम नै, सामान्य नियम विषय सम्बन्धित।
कारण यस्तो जानकारी र यसको संरचना को स्थानमा उच्च विश्वसनीयता प्रदर्शन हासिल। प्रयोगकर्ता, सक्नुहुन्छ कसरी पुनर्स्थापना फाइल प्रणाली, र अन्य सञ्चालन पूरा। साथै, उहाँले सधैं सञ्चालन प्रणाली नै अक्सर आवश्यक फाइल प्रणाली कुनै पनि ड्राइभ ढाँचा क्षमता प्रदान गर्दछ किनभने कसरी, फाइल सिस्टम परिवर्तन थाहा हुनेछ।
को NTFS फाइल सिस्टम, प्रत्येक फाइल जो आफ्नो स्थिति र गुण निर्धारण गर्न सक्छन् जानकारी केही प्रकार, गर्न सम्मानित छन्। MFA - मास्टर फाइल तालिका, डिस्क वा मात्रा को एक निश्चित खण्ड ओगटेको छ। यो प्रत्येक फाइल बारेमा सामान्य जानकारी प्रयोग गर्दछ। MFT - मिरर एक क्षतिग्रस्त छ घटनाको, नक्कली भण्डार। डिस्क खण्डहरूमा र आफ्नो स्थान, र यो सूचना MFT स्टोर जानकारी डिस्क को तार्किक केन्द्र नक्कल छ। पुनर्स्थापना गर्न फाइलहरू MFT अर्को प्रविष्टि आवश्यक - यो लग वा लग।
कसरी पासो परहेज, पीडीएफ मुद्रण गर्न
यसलाई गायब यदि एक फ्लैश ड्राइव कसरी पुनर्स्थापना र मुद्रण कागजातहरू?
चन्द्र पछाडि पक्षमा के हो? चन्द्र पछाडि पक्षमा के स्थित lowlands? चन्द्र को समुद्र छेउमा के हो?
Lomonosov काम गर्दछ। Lomonosov गरेको वैज्ञानिक काम नाम। Lomonosov गरेको वैज्ञानिक रसायन मा, अर्थव्यवस्था मा, साहित्य को क्षेत्र मा काम
शिशु सूत्र "Nutrilon": समीक्षा र वर्गीकरण
अस्पताल "स्पार्क" (सोची): समीक्षा, फोटो
मौरीले लागि जाल। शुरुआती beekeepers लागि जानकारी
कसरी राम्रो औषधि छनौट गर्ने - "डफस्टन" वा "यूटروزहस्ता"?
आज पढ्न: सबै भन्दा राम्रो पुस्तकहरू र्याङ्किङ्ग। मा रूसी सबैभन्दा पढ्ने किताबहरु
विश्लेषककालागिक्लिकगर्नुहोस् र सचेत को सञ्चालनको मूल्य र सिद्धान्त